tokoa raha misy ihany koa ireo efa lehibe saingy ireo eo anelanelan’ny 30 ka hatramin’ny 45 taona no betsaka. Tsy hita manaraka fitsaboana intsony anefa ny 400 amin’izy ireo raha ny vaovao voaray avy amin’ny lehiben’ny tobim-pitsaboana miankina amin’ny fanjakana iray any an-toerana. Efa nihinam-panafody anefa izy ireo ary raha mahavita ny manohy izany hatramin’ny farany izay marihina fa tsy handoavam-bola dia tokony ho sitrana soa aman-tsara. Manoloana io tranga io dia fantatra fa hanova paikady amin’ny fandraisana an-tanana ireo olona mitondra ny otrik’aretina Vih/ SIDA ny komitim-pirenena miady amin’izany. Hotohizana hatrany ny fanaovana fitiliana ho an’ny tsirairay, indrindra fa ho an’ireo vehivavy bevohoka. Izay olona fantatra fa lasibatry ny aretina dia arahi-maso avokoa ireo olona akaiky azy toy ny fianakaviany sy ny olon-tiany na ny vadiny hahafahana misoroka ny aretina tsy hifindra. Nandritra ny atrikasa notanterahin’ny komitim-pirenena miady amin’ny aretina SIDA tany an-toerana ny fiandohan’ny herinandro teo no nahafantarana izany. Ho an’ny faritra Sofia manokana dia fantatra fa olona miisa 200 no mitondra ny otrik’aretina Vih/SIDA.